wararka manta | ISKU SOO DHAWEEYAHA BULSHADA SOOMAALIYEED
paplisho on 13-3-2011 by abdi aziiz
Culumo tacsi u direysa qoyska Sh. Cumar Faaruuq
Waxaa tacsi tiiraanyo leh loo dirayaa Qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegay Sheekh Cumar Faaruukh Xaaji Cabdi Suldaan oo taariiqdu markey ahayd 08/03/2011 waafaqsan 03/04/1432 ku geeriyooday magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Sacuudiga.
Waxaa diraya tacsida dadka kala ah:-
1. Sheekh Cabdi Rashiid Caafi
2. Dahir Maxamed Cali
3. Maxamed Cabdi Raxman Madoobe
4. Badru,diin Sheekh Rashiid
5. Ducaale Cali Faarax
6. Caamir Sheekh Xuseen baxari
7. Amiin sheekh c/llaahi cabdi
8. Maxamed c/raxman Yuusuf Cabdulle
9. C/llhi C/weli Faarax
10 .Cumar cabdi dhere
11. Dahir Ibrahim sheekh C/llaahi
12. Xasan Cali Faarax
13. Abshir Sheekh Sadaq
14. Maxmed Axmed Dahir
15.. Cali Cabdi haajir
16. Cabdiraxmaan Axmed Cumar (cabdi jidow)
17. Muuse toroole
18. Cabdirisaaq Gumbe
Dhamaan dadkaasi waxa ay eebe kaga tuugeen inuu janatul firdowsa ka waraabiyo,qoyski iyo qaraabadii uu ka tegeyna samir iyo iimaan allaha ka siiyo, Aamiin Aamiin Aamiin.
kala soco wararka cusub ( http://www.towfiiq.wordpress.com )
soosaaraha wararka ruuney c/salam
Madaxweyne Shiikh Shariif iyo Wafdigii Uu Hoggaaminayay oo Maanta Dalka dib ugu soo Laabtay.
Wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha dawladda ku meel Gaarka Soomaaliya ayaa manta Dalka Dib ugu soo laabtay ka gadaal markii ay ka soo qayb galeen shir madaxda wadamada Carabtu ay ku yeesheen dalka Isu tagga Imaaradka carabta.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka Diyaaradaha ku soo dhaweeyay Mudanayaal ka tirsan barlamanka federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa markii uu gaaray xarunta Madaxtooyada halkaa hadalo kooban ku siiyay saxaafadda isagoo ugu horeyna u mahad celiyay xubnihii Maanta oo soon ah haddana jimca ah ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalda Muqdisho.
Sheikh Shariif ayaa ka hadlay xaaladda dalka ka jirta isagoona hoosta ka xarriiqay in qof walba oo Soomaali ah uu dhiban yahay si dhibkaas looga baxana loo baahan yahay in dib loo soo celiyo hay’adihii dawladda ee adeegayaasha ahaa.
Sheikh Shariif ayaa dhinaca kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay la yimadaan midnimo isagoona ugu bishaareeyay in dhibaatada laga bixi doono balse loo baahan yahay sabir iyo iskaashi dhinac walba leh.
Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay sidoo kale in maadaama lagu jiro Bishii barakaysneed ee Ramadaan inay isu is taakuleeyaan isuna ixsaan falaan.
Madaxweyne Shariif ayaa sidoo kale shirkiisaasi jaraa’id ku soo qaaday shirkii wadamada carabta ee uu ka qayb galay isagoona sheegey in shirkaasi lagu soo qaaday sidii dalalka carabta sidii ay u taageeri lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada la daalaa dhacayay mudada labaatanka ku dhawaadka.
Madaxweynaha ayaa ugu danabyntii shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay Guulo iyo inay ramadankan Ramadaankiisa ku gaaraan nabad iyo horumar waa siduu hadalka u yiriye.
Si kasta ha ahaatee safarada ay ku baxaan mas’uuliyiinta dalka ugu sareeysa ayaa ah mid joogta, soo noqoshadan uu dalka dib ugu soo laabtay Madaxweynaha ayaa waxa ay imaanaysaa xilli Ra’iisul wasaaraha Dalka uu haatan Safar dibadda uu ku maqan yahay iyadoo todobaad ka horna uu dalka ku soo laabtay Guddoomiyaha barlamaanka.
soosaaraha wararka ibrahim c/qaadir
posto by ibraahim130@hotmail.com
M/weyne Shariif oo ka dhoofay Muqdisho
Muqdisho, Soomaaliya (www.towfiiq.wordpr
M/weynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi la socda ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cade Airport.
Wafdiga m/weynaha oo kusii jeeda dalka isu tagga Imaaraadka ayaa sii maraya marka hore dalka Kenya halkaasoo ay kaga sii safri doonaan Dubai.
M/weynaha ayaa la sheegay in uu casuumaad rasmi ah ka helay boqorka dalkaasi, walina ma cada waxa ay ka wada hadli doonaan.
Xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa qeyb ka ah wafdiga m/weynaha.
Xildhibanada Golaha Deganka Gobolka banadir Oo Ka Soo Hor Jeestay Xilka Duqa Magalada ee Maxamud Axmed Tarzan
(towfiiq.wordpress)Shir ay manta isugu yimaadeen Xildhibaanada Golaha Degaanka Goboilka banaadir ayay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ku jirto Xilka Duqa Magaalada Muqdisho oo xilligan uu ku magacaaban yahay Guddoomiyaha Gobolka banaadir Xil Maxamuud Axmed Tarzan.
Xildhibaanada ayaa sheegey in ay aqoonsan yihiin xilka Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ee Md Tarzan balse ayan aqoonsanayn una aqoonsanayn Tarzan inuu yahay duqa Magaalada Muqdis
Mid ka mid ah xildhibaanadii manta kulanka isugu yimiid oo saxaafadda la hadlayay gaba gabadii shirkoodaas ayuu shegey in duqa magaalada uusan ahayn Tarzan balse ay aqoon san yihiin oo keliya guddoomiyaha Maamulka
Xildhibaanadan ayaa ku eedeeyey Madaxweynaha Dawladda Ku Meel gaarka Shiikh Shariif inuu isagu xilkaasi magacabay.
Xildhibaanada golaha degaanka ayaa sheegey in ay iyagu xaq u leeyihiin in ay doortaan Duqa Magaalada balse uusan Madaxweynuhu toos u soo magacaabi Karin.
Xildhibaada degaanka Banaadir ayaa intaa ku daray inuusan jirin xilligan duq magaalo oo ay aqoonsan yihiin balse uu jiro Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir waa sidey hadalka u dhigeenee.
Xildhibaanadan Maanta shirka isugu yimid ayaa amaanay wax qabadka Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Md Tarzan oo ay sheegeen inuu dadaal ugu jiro sidii uu dib ugu soo celin lahaa bilicsamadii magaalada Caasimadda ah iyo waliba dhinaceedii amaanka.
Shirkan ay manta uga hadlayeen arrimaha Duqa Magaalada ayay ku sheegeen Xildhibaanada Golaha Degaanka Gobolka Banaadir in ay ka codsadeen Mas’uuliyiinta xukuumadda in loo ogolaado in ay soo doortaan Duqii magalada Muqdisho maadama Tarzan ay uaqoonsan yihiin oo keliya guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir.
Si kasta ha ahaatee ma aha markii u horreeyey oo golaha degaanka Gobolka banaadir ay ka hadlaan arrimaha Maamulka Gobolka, gaar ahaana intii uu jirey Maamulkii Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Eng. Nuune oo khilaaf ba’an uu kala dhexeeyey Golaha Degaanka Gobolka Banaadir.
xafiiska wararka e mugadhisho
Maamulka Ururka Xisbul Islaam ee Degaanka Lafoole oo Maanta Amaro Soo saaray.
Maamulka Ururuka Xisbul Islaam ee degaanka Lafoole ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa Maanta Soo saaray Amaro ay dadka halkaa deggan ugu sheegayaan in inta lagu Jiro Bisha barakaysan ee Ramadaan aan la furi Karin Maalintii goobaha Cuntada lagu kariyo.
Maamulka ayaa uga Digay Dadka leh Maqaayadaha iyo goobaha kale ee cuntada lagu sameeyo iyagoona sheegey in ciddii ay ku arkaan inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo maalin cad raashiin samaynaysa in ay ka qaadi doonaan tallaabo culus.
Sii hayaha xafiiska Dacwada Shiikh Maxamed Isaaq oo war baahinta la hadlay ayaa sheegey in dadka Ma Soomaayasha ah qudhooda looga digayo in ay isa soo ban dhigaan isagoona intaa ku daray in dadka Masoomayaasha ah ay soomaan Allana ka Cabsadaan.
Sheikh Isaaq dhinaca kale ka codsaday dadka ku dhaqan degaanka Lafoole in ay is caawiyaan isla markaana dadka walaalahooda ah ee aan wax haysan ay wax siiyaan.
Sii hayaha Xafiiska Dacwada ee Ururka Xisbul Islaam ee Degaanka Lafoole ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka halkaa ku dhaqan in ay isu diyaariyaan sidii ay u qaabili lahaayeen Bisha barakaysan ee Ramadaan ee foodda nagu soo haysa isagoona mar kale ka codsaday in walaalahooda dhibaatsyan ay wax taraan intooda wax haysata.
Shalay ayay ahayd markii hoggaamiyaha ururka xisbul Islaan Shiikh Xasan Daahir Aweys oo isla degaanadaa ka hadlayay uu soo ban dhigay in bisha barakaysan Faligeeda ay walaalaha Muslimiinta ay is caawiyaan.
Si kasta ha ahaatee waxaa guud ahaan dalka ka jira Barnaamij aan abaabulkneen haddana ay dadku isku wacyi gelinayaan in wax la is taro iyadoo goobaha lagu cibaadeystoo iyo meelaha bulshadu isugu timaadana aad ka maqlayso wacyi gelin la isku wacyi gelinayo sidii wax la isu tare lahaa gaar ahaan mudada lagu jiro Bisha Barakaysan ee Ramaan.
Si kasta ha ahaatee waa soo gabaabsiyaya diyaar garowgii ay dadka ugu jireen bisha soon qaad iyadoona ay soo dhamaanayaan Dukmeysigii iyo diyaar garowgii maalmahanba ay wadeen Shacabka Ku Dhaqan Magaalada Muqdisho iyo Magaalooyinka kale ee Dalka.
Maamulka Xarakada Shabaabul Mujaahiddiin ee degmada Dhoobleey ayaa Maanta Kulamo xasaasi ah la qaatay wax garadka iyo Odayaasha Magaaladaas.
Kulankan ayaa ahaa mid si weyn diiradda loogu saaray xaaladaha ka soo cusboonaaday guud ahaan gobolada Jubbooyinka gaar ahaana degmada Dhoobleey ee gobolka Jubada Hoose.
Kulankan ayaa lagu soo hadal qaaday dagaalo dhawaan ciidamo uu watay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay ku soo qaadeen degaano hoos yimaada Degmada Dhoobleey.
Maamulka iyo Odayaashii kulankaa isugu yimid ayaa si weyn uga hadlay sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ahaan Gobolada Jubbooyinka isla markaana loog hor tegi lahaa Ciidamada ay sheegeen inay dabada kula jiraan Dawladda Kiinya.
Guddoomioyaha Maamulka Xarakada Shabaab ee magaalada Dhoobleey oo gaba gabadii kulankaas ay isugu yimaadeen Odayasha, wax garadka iyo Saraakiisha Shabaab ayaa sheegey in loo baahan yahay guud ahaan dadka ku dhqan degmada Dhoobleey sidii dagaal la isugu diyaarin lahaa.
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xarriiqay in aysan wanaagsanayn in Kooxda uu wato Axmed Madoobe in dib danbe ay dagaal ugu soo qaadaan degaanada ay ka taliyaan xarakada shabaabul Mujaahiddiin isagoona intaa raaciyay in odayaasha iyo wax garadka looga baahan yahay in kaalintooda ay soo buuxiyaan.
Odayaashii iyo wax garadkii Kulankaas soo xaadirayay ayaa halkaa ballan qaadya ah in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ka soo jeediyay iyagoona sheegey in ay taageerayaan ciidamada xarakada shabaabul Mujaahiddiin.
Si kasta ha ahaatee dhawaan ayay ahayd markii Ciidamo uu hoggaaminayo Axmed Maxamed islaam ay soo gaareen degaano hoos yimaada degmada dhoobleey isla markaana saldhigyo xarakada shabaabul Mujaahiddiin ay ku lahaayeen halkaa muddo si kooban ugala wareegey iyagoona sheegey inay khasaarooyin u geysteen ciidamadii fariisimadaa ku sugnaa ee ka tirsanaa xarakada shabaabul Mujaahiddiin.
xafiiska wararka towfiiqword
Shil Gaari Oo Ka Dhacay wadada Warshadaha oo Sababay Khasaare Dhimasho Iyo Dhaawacba leh
Inta la ogyahay Illaa labo Ruux ayaa Geeryootay halka tiro intaa ka badanina ay ku dhaawacmeen Shil gaari oo barqanimadiimaanta ka dhacay wadada warashadaha ee magaaladan Muqdisho.
Shilkan gaari ayaa yimi ka gadaal markii Gaari ka tegay Magaalada Muqdisho iyo ka yimid Degaanka Lr 50 ay isku hardiyeen inta u dhaxaysa Kuliyaddii hore ee Jaalle Siyaad iyo Ex. Af Gooye.
Labadan gaari oo mid walba oo ka mid ah uu ku socday xawaare aad u dheereynaya ayaa isku dhacay kuwaasoo siday dad rakaab ah oo qaarna magaalada soo galayeen qaar kalena ay ka baxayeen.
Labada qof ee shilkaa ku geeryootay ayaa waxaa ay ka mid ahaayeen rakaabkii la socday labada gaari oo isku dhacday halka kuwii ku dhaawacmayna loola cararay Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Inta badan shilalka ka dhaca waddooyinka ayaa loo aaneeyaa wadayaasha qaarkood oo aan khibrad lahayn iyo waddooyinka oo ah kuwo bur bursan isla markaana aan dayac tiri helin dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Dhinaca kalena Shil Gaari oo isla manta ka dhacay inta u dhaxaysa Magaalooyinka Mareer Guur iyo Godin labe ayaa sababay khasaare isugu jira Dhimasho iyo dhaawac.
Shilkan gaari ayaa yimi ka gadaal markii gaari ka anbabaxay magaalda Guri Ceel oo ku sii jeeday magaalada Gaalkacyo uu qalibmay halkaasoo uu ku dhintay hal qof halak sided kalena ay ku dhaawacmeen.
Dadkii shilkaas ku waxyeeloobay ayaa waxaa u soo gudmaday dadka ku dhaqan degaanka Mareer Guur kuwaasoo dadkii dib ugu soo daabuley Mareer guur in kastoo warar goor danbe soo baxayna ay tibaaxayeen in dadkii shilkaas ku dhaawacmay loo qaaday Magaalada Gaalkacyo si halkaa loogu dabiibo.
Shilalka ka dhaca waddooyinka dalka ayaa ah kuwo inta badan loo aaneeyo bur burka waddooyinkaas ka jira iyo wadayaasha oo aan si aan xasilooneyn u wada gaadiidka ay wadaan iyagoonan u eegeyn in gaadiidku uu rakaab sido iyo inuu badeeco sido midnaba.
Si kasta ha ahaatee shilalka ayaa waayadan danbe noqdey kuwo isa soo taraya gaar ahaana shilalka waddo ee ka dhaca Koofurta Soomaaliya.
xafiiska wararka towfiiq.wordpress
Najma Axmed oo su`aal ku aadan Somalia weydiisay m/weyne Obama
Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Najma Axmed Cabdi ayaa su`aal ku aadan arrinta Soomaaliya weydiisay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama kadib markii ay ka qeyb gashay kulan uu madaxweynuhu kula qaatay Aqalka Cad ee Mareykanka dhalinyaro Afrikaan ah.
Najma ayaa qeyb ka aheyd dhalinyaro kor u dhaafeysay 115-ruux oo loo soo xulay in ay kulan la qaataan m/weyne Obama, waxaana ay deegaan ahaan dagan tahay dalka Ingriiska.
Kulankan oo gaba-gabadiisa su`aalo lagu weydiinayay m/weynaha ayaa waxaa su`aashii ugu dambeysay nasiib u yeelatay in ay weydiiso Najma m/eynaha, waxaana ay su? aasheedu u dhigneyd sida tan:
“Galab wanaagsan m/weyne, magaceygu waa Najma Cabdi Axmed, waxaana ka imid dalka Soomaaliya. Ilaa Ingriiska waxaan kala imid hal su`aal, waxayna tahay: Colaad ayaan kusoo noolaaday iyo dal aduunka dhan wareeriyay, waxaana ka mid ahay qurba-joogta naftooda qatarta u galiyay si Soomaaliya looga dhigo meel dhaanta sida maanta ay tahay. Hadaba taageero noocee ah ayaan ka sugi karnaa Mareykanka, marka aan ka hadlayana taageero ula ma jeedo oo kaliya dhaqaale iyo raashiin balse taageero saaxiibtinimo iyo qof dhageysta kuweena u huraya nafteena iyo qaraabadeena si loo difaaco bini`aadamnimada?”
Obama ayaa jawaab dheer ka bixiyay su`aasha Najma, waxaana uu sheegay in shacabka iyo dowladda Mareykankaba ay taageero nooc walba leh la garab taagan tahay Soomaaliya, wuxuuna intaasi raaciyay in Mareykanku doonayo in uu saaxiib la noqdo Soomaaliya dadaalkaasna ay iminka wadaan.
Su`aasha Najma iyo jawaabta Obama ka dhageyso BBC-soomaali >> -Dhageyso
Soomaaliya ayuu sheegay in nabad buuxda iyo dimuquradiyad dhaqso looga dhalin karin, balse ay socdaan dadaalo lagu gaarsiinayo arintaasi.
Waxa uu soo hadal qaaday khatarta argagixisada salka dhigatay Soomaaliya iyo weeraradii argagixiso ee lala beegtay caasimadda dalka Uganda ee Kampala.
Geeska Afrika ayuu sheegay in ay khatarta argagixisada Soomaaliya saameysay, wuxuuna sheegay hadaan laga hortagin in ay saameyn doonto dalka Mareykanka.
Su`aasha Najma oo film ah waxaad ka daawan karta bbc somali tv
Dawladda Ku Meel Gaarka oo Maanta Deeqo Gaarsiisay Isbitalka Hoyada iyo Dhallaanka ee Banaadir
Wasiirka Aadanimada iyo dib u dejinta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Maxamed Cabdi Gar weyne ayaa manta deeq Raashiin Nafaqa u badan gaarsiiyay isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Magaalada Muqdisho.
Wasiirka oo deeqdaa kaddib saxaafadda la hadlayay ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay raashiinka ay wadaan oo ay gaarisiyeen Isbitaalka iyo Kimiyada ay ka kooban tahay.
Maxamed Cabdi Gar weyne oo hadalkiisa wata ayaa sheegey in Dawladda Soomaaliya Deeqdan ay ka heshay Dawladda Masar isagoona sheegey in loogu tala galay Caruurta iyo Haweenka Nafqa darada ay haysato oo ku sugan Isbitaalka Banaadir.
Wasiirka ayaa sheegey in deeqdaasi ay ka kooban Digir dhowr Nooc ah oo Faasuuliya iyo Caano Boore kuwaasoo uu sheegey in ay aad u nafaqayneyso Caruurta iminka la tacbaansan Nafaqa Darada.
Wasiirka ayaa u mahad celiyay Xukuumadda Masar oo uu sheegey in ay tahay Dawladdii Carbeed oo ugu horeysey oo deeq noocaan oo kale soo gaarsiisay isagoona intaa ku daray in ay tahay mid si weyn wax uga taraysa xaaladda ay iminka ku sugan yihiin caruurta ku jirta Isbitaalka Banaadir.
Maamulka Isbitaalka Banaadir oo iyaguna Munaasibadda ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay Mas’uuliyiinta Wasaaradda aadanimada iyo dib u dajinta iyagoona sheegey in deeqdani ay tahay mid si weyn xilligan loogu baahnaa.
Maamulka Isbitaalka ayaa ka war bixiyay Bukaanada xilligan ku sugan gudaha Isbitaalka kuwaasoo uu sheegey in aysan haysan wax yaabo badan oo ay ka mid tahay Daawooyinkii ay u baahnaayeen Bukaanada Xiligan ku sugan Isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Banaadir.
Si kasta ha ahaatee waa markii u horreeyey oo deeq noocaan ah wasaaraddu ay gaarsiiso Isbitaalka Hooyada iyo Dhalaanka Banaadir ee magaalada Muqdisho taasoo si weyn ay u soo dhaweeyeen Shaqaalaha iyo bukaanada isbitaalkaas ku sugan.
Xafiiska wararka http://www.towfiiq.wordpress.com ee <Muqdisho wariye ,c/wahaab c/laahi qaliif .
posto , khaliif50@hotmail.com or xanafi2010@hotmail.com
Saturday, July 31st, 2010 | Posted by c/wahaab c/dullaahi qaliif
Culumaa’uddiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo Soo Dhaweeyay Go’aanadii Ka Soo baxay Shirkii Midowga Afrika ee Kanbala.
Xoghayaha Guud ee War Faafinta Culumaau’uddiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee gobolka Banaadir Shiikh Ax,ed Maxamed Shuuriye oo manta shir jaraa’id ku qabtay magaalda Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go’aankii dhawaan ka soo baxay shirkii madaxda afrika ee magaalda Kanbala ee dalka Ugandha.
Xoghayaha ayaa sheegey in loo baahan yahay in la soo dhaweeyo ciidmada tiradoodu ay gaarryso illaa labada Kun ee askeri ee la sheegey inay ku biirayaan hawl galka AMISOM ee magaalda Muqdisho.
Sheikh Axmed oo shirkiisa Jaraa’id sii wata ayaa ka codsaday Qaramada Midoobey in Nidaamka ay haatan ku shaqeeyaabn ciidamadaas wax laga bedelo lagana dhigno Nabad Dhaliyayaal si banaanka ugu baxaan isla markaana ay weeraraan xarumaha ay ku sugan yihiin waa siduu hadalka u dhigaye kuwa Soomaali isku sheegga ah.
Shiikha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku taliyay in haddii taa la dhaqan geliyo ay yaraaneyso duqeymaha iyo madaafiicda ku dhacaysa dadka Rayidka ah isla markaana lciidamadu ay awoodayaan inay bar tilmaameedsadaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha dawladda la dagaalamaya.
Xoghayaha guud eed War Faafinta ee Culumaau’udiinka Ahlu Sunna ee gobolka Banaadir ayaa dhinaca kale si weyn u dhaliilay xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya oo uu sheegey in ay ka gaabisey Heshiisyadii lagu kala saxiixday magaalda Addis ababa.
Sheikh Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in dhinaca dawladda ay ka sugayeen inay si buuxdo u taageerto dagaalada iyo halgganka ay wadaan culumada ahlu sunna wal jamaaca balse ayan taa dhicin waa siduu hadalka u dhigaye.
Xoghayaha ayaa ka codsaday dhinaca dawladda inay dhaqan geliso dhamaanba qodobadii lagu soo heshiiyay isla markana ay xukuumaddu soo buuxiso doorka kaga aadan dagaalada lagula jiro kooxaha dawladda diiddan.
Shiikha ayaa sheegey in iyagu weli ay taageersan yihiin xukuumadda isla markaana ay tahay xukuumadooda laakiin loo b aahan yahay taageerada looga baahan yahay in ay la timaado si meesha looga saaro ayuu yiri kooxaha cadowga ah ee dalka ku soo duuley.
Si kasta ha ahaatee ma aha markii u horeeyey ee mas’uuliyiinta ahlu sunna wal jamaaca ay dhaleeceeyaan Dawladda iyagoona ku saluugaya wax qabad la’aan iyo taageero la’an iyagoo horeyna u sheegey in kaalmadii Milatery iyo tii dhaqaale oo ay dawlada uga baahnaayeen inaysan ka helin.
Xafiiska wararka towfiiq.wordpress.comee Muqdisho.
wariye c/wahaab c/wahab c/lahi qaliif
posto khaliif50@hotmail.com or xanafi2010@hotmail.com
Saturday, July 31st, 2010 | Posted byc/wahaab c/lahi qaliif
Kal fadhigii Barlamanka oo Maanta Mar kale la Isugu yimid. Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada Barlamaanka Ku Meel Gaarka Soomaaliya ayaa Maanta Kulankoodii Caadiga ahaa ku yeeshay Xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Fadhigii manta oo uu shir guddoominayay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Barlamanka Muudeey ayaa waxaa looga hadlayay qodobadii waayadanba uu ka doodayay Barlamaanku.
Ka hor intii aan la bilaabin shirka oo iminka weli halkiisii ka sii soconaya ayaa Guddoomiye Ku Xigeenka Koowaad ee Barlamanka oo ah Guddoonka barlamanku wuxuu Mudanayaasha u sheegey in Maalinimada Beri ah Golaha Xukuumaddu ay hor imaan doonto Barlamanka isla markaana ay weeydiisan doonto Codka Kalsoonida.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in uu jirey Mooshin ay hore qaar ka tirsan Xildhibaanada Barlamaanku uga keeneen Xukuumadda iyadoona Maalinimada Beri ah loo balan san yahay in Xukuumaddu ay hor timaaddo Barlamanka Fadhigiisa.
Intaas kaddib ayaa waxaa loo gudbaya Qodobka 13aad ee Xeer Hosaadka Barlamanka kaasoo ay mudanayashu dooddiisa u guda galeen.
Qodobkan oo ka mid ah qodobada dhowrka ah ee hor yaala ayaa dooddiisu dheeraatay iyadoo xildhibaanaduna ay ka hadlayaan in kastoo la isku kala aragti duwan yahay.
Xildhibaanada ayaa sheegey in qodobkaasi dib loogu soo nqon doono isla Maanta Saacadaha danbe iyadoo xiligan aan joogno la hakiyay Fadhiga si loo soo tukado loona soo qadeeyo.
Wixii warar dheeraad ah iyo ansixinta qodobkaas waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayaga danbe.
Xafiiska wararka towfiiq.wordpress.com Muqdisho. c/wahaab c/lahi qaliif .,,,,,, posto by khaliif50@hotmail.com or xanafi2010@hotmail.com
July 31st, 2010 | Posted in c/wahab c/lahi qaliif
Kooxo Hubaysan Oo Barqadii Maanta Nin Ku Dilay Magalada Galkacyo Mid kalena Ku dhaawacay.
Wararka naga soo gaaraya magaalda Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay Maanta Dileen Madaxii Shirkadda Qaran Exrrees ee Magaalda Gaalkacyo waqooyigeeda halka Ilaaliyihiisana ay dhaawaceen.
Warka ayaa intaa ku daray in Raggan Dableyda ah ee aan la garan inay soo weerareen Xarunta Shirkadda Xawaaladda Qaran ay ku leedahay Magaalada Gaalkacyo Waqooyigeeda halaasna ku dileen Madaxii Shirkada isla markaana ku dhaawceen mid ilaaladiisa ka mid ah.
Ninkan la Dilay oo lagu Magacaabo Jaamac Dheere ayaa kaddib Dilkiisa waxay Kooxdaasi halkaa ka qaateen Lacago fara badan oo halkaa yaalay.
Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga carartay kaddib markii ay halkaa ka qaateen Lacago fara badan.
Ma jirto illaa iyo iminka cid ka hadashay Dilka Ninkaas Jaamac Dheere la dhihi jirey oo Kooxaha Hubaysan barqadii manta ku toogteen gudaha Magaalada gaalkaco dhinaceeda Waqooyi.
Ma aha markii u horeeyay oo gudaha magaalada gaalkacyo Fal noocaan ah uu ka dhaco toddobaadkii hore bayna ahayd markii halkaa lagu dilay Ganacsade si weyn looga yaqaanay magaalada Gaalkacyo.
Ciidamada Ammaanka ee Maamul Goboleedka Pont land oo goor danbe ka hadlay Dilkii manta meeshaa ka dhacay ayaa sheegey inay baari doonaan isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan kooxihii ka danbeeyay falka lagu dilay Ninkaa jaamac dheere ah.
Ciidamada Ammaanka ee maamul goboleedkaas ayaa hore u sheegey in ay sii wadi doonaan sugidda ammaanka iyo daba gelidda kooxaha falalka amni darada ka wada gudaha magaalada gaalkacyo.
Ma jiraan wax war ah oo dheeraad ah oo ka soo baxay Boliiska iyo Kooxihii dilkaa ka danbeeyay labadaba wixiise warar ah eek u soo kordha waxaad kaga bogan doontaan wararkayaga danbe.
Xafiiska wararka e mugadhisho wariye c/wahaab c/lahi qaliif
posto by khliif50@hotmail.com or xanafi2010@hotmail.com.
Saturday, July 31st, 2010 c/wahab c/lhi qaliif
Madaxweyne Shariif iyo Wafdigiisii oo Maanta Dalka dib ugu soo noqdey.
Madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa manta dalka Dib ugu soo laabtay ka gadaal markii uu ka soo qayb galay Shirkii Madaxda Afrika oo dhawaan lagu soo gaba gabeeyey magaalda kanbala ee dalka Ugandha.
Madaxweynaha ayaa shirkaa ka hor iyo kaddib safaro ku soo kala bixiyay dalal ay ka mid tahay dawladda talyaaniga.
Madaxweynaha ayaa shirkii kaddib waxaa uu safar ku tegey magaalda Nayroobi ee dalka Kiinya isagoona halkaa kulamo kua qaatay mas’uuliyiin kala duwan ee ka kala socotay beesha caalamka.
Madaxweynaha oo ay wafdigiisu ka mid ahaayeen Xildhibaano iyo Wasiiro ayaa markii uu soo gaaray magaalda Muqdisho waxaa halkaa si diiran ugu soo dhaweysey mas’uuliyiin ka kala socotay labada Gole ee Xukuumadda.
Madaxweynaha oo saxafadda Ereyo Kooban siiyay ayaa ugu horeyn sheegey inuu si weyn ugu faraxsan yahay inuu dalka dib ugu soo noqdo.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegey in dhaamaanba safaradiisa ay ku soo dhamaadeen si guul ah isagoona sheegey dhamaanba mas’uuliyiintii ay kulmeen in ay isla soo qaadeen Xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaas ka dhaxeeya isagoona sheegey in dhamaanba mas’uuliyiintii iyo madaxdii uu la kulmay in ay u balan qaadeen inay taageeri doonaan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya.
Madaxweyne Shiikh Shariif ayaa sidoo kale ka hadlay Kulankii Madaxda Afrika ay isugu yimaadeen magaalada Kanbala isagoona sheegey in kulankaas inta badan looga hadlay arrimaha Soomaaliya isla markaana ay ka soo baxeen natiijo wax ku ool ah.
Madaxweynaha ayaa aad ugu mahad celiyay xubnihii ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha isagoo intaa kaddibna sheegey inuu qaban doono kulan ballaaran oo ku faah faahin doono wadamadii iyo madaxdii ay wada hadleen intii uu ku guda jiray Safardii uu ku soo maraya dalalkii uu booqday.
Madaxweyne Shariif ayaan inta badan looga baran Kulan Saxaafadeed uu qabto marka uu soo dego ama uu dhoofayo iyadoo maantana markii ugu horeeyay uu Saxaafadda kula hadlay Garoonka Diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho.
Si kastaba madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa dib loogu soo galbiyay xarunta Madaxtooyada iyadoo halkaasna ay ku soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya.
posto xanafi2010@hotmail.com or ruuney149@hotmail.com
Saturday, July 31st, 2010 posto in ruuney c/salaan
Dawladda China oo Shaacisay in Labo Markab oo Kamid ah Kuwa Dagaalka ay Kala Baxday Xeebaha Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Dawladda Shiinaha ayaa shaacisay in ay Xeebaha Soomaaliya kala baxday labo markab oo kamid ah Maraakiibta dagaalka ee ilaalada ka yahayey xeebaha Soomalaiya
War ay soo saartay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Dawladda Shiinaha ayaa waxaa lagu sheegay in labo kamid ah Maraakibta dagaalka ee Shiinaha kaga sugnaa xeebaha Soomaaliya ay dib uga laabteen kadib markii ay dhamaatay mudaddii loogu talagalay in ay ka qayb qaataan hawlgalka la dagaalanka Burcad Badeedda ee xeebaha Soomaaliya.
Labadan markab ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen maraakiibta dagaalka ee xeebaha Soomaaliya ka wada waxa loogu yeero hawlgalka la dagaalanka Burcad Badeeda, sidoo kale hawlaha ay maraakiibtaan u joogeen xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa kamid ah ilaalinta maraakiibta ganacsiga ee Shiinaha laga leeyahay ee mara biyaha Soomaaliya.
Maraakiibtaan ayaa waxa ay Dawladda Shiinahu sheegtay in ay maal mahii lasoo dhaafay ku sugnaayeen xeebta Magaalada Alexandria ee dalka Masar iyaga oo maalintii Jimcaha hayd halkaasi ka ambabaxay kuna wajahan Dalkoodii Shiinaha.
Taliyaha Ciidamada Shiinaha ee kusugan xeebaha Somaaliya hase yeeshee iminka isaga baxay ayaa waxa uu sharraxaad ka bxiyey hawsha ay maraakiibtaan u joogeen xeebaha Soomaaliya waxaana uu sheegay in ay ku guulaysteen maraakiibtaan intii ay ku sugnaayeen xeebaha Soomaaliya gelbinta maraakiib ka badan 588-markab oo isugu jiray kuwo ganacsi iyo kuwo kale oo dhamaan ku gooshay biyaha Soomaaliya iyaga oo ay dusha ka ilaalinaayeen Ciidamada Shiinaha ee dul saarnaa maraakiibtaan maanta u bakhoolay dalka Shiinaha.
towfiiq mugadhisho Somalia
Wafddi uu Hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha Dibadda Dawladda Kmg Somaliya oo Shalay Gelinkii danbe Gaaray Dalka Yaman.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Dheeg iyo wafddi uu hoggaaminayo ayaa maalinimadii shalay gaaray dalka Yaman isagoo ka baqooley dalka Ugandha oo waayadanba uu ku sugnaa isagoo ka qayb galayay shirkii wasiirada arriaha dibadda ee dalalka afrika dhawaan halkaa ugu soo gaba gaboobay.
Wasiirka ayaa sida la sheegey waxa uu ka qayb galayaa shir lagu wado in Maalinimada berri ah uu ka furmo Magaalda Sanca ee dalka Yaman.
Shirkan oo ay qayb galayaan wadamada ku bahoobay Ururka Kulanka Sanca oo ay xubno ka yihiin Suuddaan, Itooiya Jabuuti Yaman iyo Soomaaliya.
Shirkan oo ah kii toddobaad oo ay Urur goboleedkaas ay isugu yimaadaan ayaa waxaa looga hadlayaa guud ahaan Ammanka dalalkaas ku jira Ururka gaar ahaan arrinta Soomaaliya oo si gaar ah diiradda loogu saarayo.
Wasirka oo shir jaraa’id ku qabtay magaalda Sanca ayaa ka hadlay xaaladaha manta ka jira Soomaaliya iyo kulankii dhawaan Madaxda Midowga afrika ugu soo gaba gaboobay magalada Kanbala ee dalka Ugandha.
Wasiirka ayaa sheegey in kulankasi looga hadlay nabadda gobolka iyo arrimaha ka taagan soomaaliya.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa waxaa halkaa si diiran ugu soo dhaweeyey dhiggiisa dalka Yaman iy safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Yaman isagoona u gudbiyay farriin uu madaxweynaha Soomaaliya ka wado kuna socota madaxweynaha dalka Yamac Cali Cabdalla Saalax.
Shirkan ayaa wajigiisa koowaad waxa ku kulmaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Xubnaha ka ah Ururkaas la magic baxay Kulanka Sanca.
Si kasta ha ahaatee shirkan ayaa snadkan ka duwan shirarkii ay hore isugu imaan jireen dalalka Ururkaas xubnaha ka ah isagoona ku soo aadaya xilli xiisado colaadeed ay ka jiraan Gobolada ay deggan yihiin qaar ka mid ah Dalalkaas.
Xafiiska wararka towfiiq Muqdisho.
Qarax Bum oo Ka Dhashay Gar garaac ay Caruur Garaacday Bumkaas oo Sababay Khasare isugu Jira Dhimasho iyo Dhaawac
Qarax ka dhashay garaac ay caruuri gar garaacday Bumbo ay meel ka soo heleen ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah caruurtii Bumkaas garacaysey halka dhowr qof kale oo goobta ka dhawaana ay ku dhaawacmeen.
Mashaqadan ayaa ka dhacday Xaafadda Guul wade ee Magaalda Kismaayo gaar ahaana agagaaraha warashadii Hilibka ee magaalda Kismaayo.
Wararka naga soo gaaraya magaalda Kismaayo ayaa sheegaya in caruurtaasi ay bumka soo heleen kaddibna iyagoo ku ciyaraya uu ku qarxay
Dadkii shilkaas ku dhaawacmay ayaa loola cararay Isbitaalka guud ee Magaalda Muqdisho iyadoo sida lagu soo waramayo labo ka mid ah dadkii shilkaas ku dhaawacmay in xaaladoodu ay liidato.
Guddoomiyaha Maamulka Xarakada shabaabul Mujaahiddiin ee magaalda Kismaayo Shiikh Xasan Yaaquub oo qaraxaas kaddib ka hadlay gudaha magaalda Kismaayo ayaa ugu horreyntii tacsi u direy qoysaskii ay dhibaatada ka soo gaartay qarixii shalay Maqribnimadii ka dhacay gudaha magaalda Kismaayo.
Sheikh Xasan Yaaquub ayaa sheegey in ay qaadi doonaan Ol olayaal ay magaalda gudaheeda uga sifeynayaan Haraadiga walxaha qarxa isagoona ka codsaday dadweynha ku dhaqan magaalda Kismaayo in Maamulka ay kala shaqeeyaan sidii loo dhamayn lahaa ama magaalda looga sifeyn lahaa walxaha qarxa.
Guddoomiyaha ayaa sheegey in walxaha qarxa ee ku sii haray gudaha magaalda Kismaayo ay ka danbeyeen dagaaladii sokeeye ee halkaa ka dhacay iyo hubkii la isku adeegsanayay qaarkiisa oo laga yaabo inuu ku sii danbeeyo meelo ka mid ah magaalda Kismaayo gudaheeda isala markaana uga digay dadka.
Ma aha markii u horreeyey ee dhacdo tanoo kale ah ay ka dhacdo gudaha magaalda Kismaayo hore ayay tanoo kale u soo martay ka gadal markii dad ka ganacsada Macdanta ay gar garaaceen bum laga soo heley meelo ka mid ah gudaha magaalda Kismaayo taasoo keentay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ahaa.
Si kasta ha ahaatee qaraxii xalay ka dhacay magaalda Kismaayo ayaa waxaa laga dareemay qaybo ka mid ah magaalada kaasoo argagax ku beeray dadkii degaanadaa degganaa ama ka ag dhawaa.
Xafiiska wararka towfiiq mugadhisho
Dagaal Maanta Mar kale Ka Dhacay Degmada Yeed oo ay Ciidamada dawladdu Dib Ula Wareegeen
Degmada Yeed oo ka tirsan gobolka Bakool isla markaana dacalka ku haysa Xadka Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya ayaa illaa shalay gelinkii danbe waxaa halkaa ka dhacayay dagaalo u dhaxeeyey ciidamada dawladda iyo ciidamada xarakada shabaabul Mujaahiddiin.
Dagaalka oo ay soo qaadeen ciidamada Xarakada shabaabul Mujaahiddiin ayaa shalay gelinkii danbe halkaa duulaan ku soo qaaday kuwaasoo muddo gacan ku haynta magaalda Yeed ay kula wareegaan.
Af hayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahiddiin oo goor sii horreysey la hadlayay Saxaafadda ayaa sheegey inay qabsadeen degmada Yeed si buuxdana ay gacantooda ugu jirto wallow warar ka soo baxay dhinaca ciidamada Dawladuna ay arrintaa beeniyeen isla markaana ay sheegeen in ay ku sugan yihiin duleedka magaalada.
Xarakada shabaabul Mujaahiddiin ayaa dagaalkaas horey guulo ballaaran uga sheegtay iyagoona sheegey in ay kula wareegeen gaari nooca dagaalka ah oo halkaa ay uga carareen Ciidamadii Dawladda.
Sarkaal u hadlay dawladda ayaa sheegey inay ku gadaaman yihiin Magaalda saacadaha soo socdana la filan karo duulaan ay dib ugu qaadaan Ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahiddiin oo iyaguna sida ay sheegeen ku sugnaa dhinaca kale ee magaalda.
Aadan Maxamed Nuur Aadan Saran Soor oo ka mid ah Saraakiisha Dawladda ee degaanadaas ku sugan oo manta la hadlay War baahinta gudaha iyo dibadda ayaa sheegey in Dagaal Rogaal celis ah oo ay qaadeen Ciidaada dawladda in ay kaga saareen Ciidamadii Xarakada Shabaabul Mujaahiddiin ee duulaanka soo qaaday,
Saran soor ayaa sheegey in ciidamadii xarakada shabaabul Mujaahddiin ay halkaa kaga dileen illaa Toban ka mid ah ciidankoodii isla markaana tiro intaa ka badan ay kaga dhaawaceen waa siduu hadalka u yiriye.
Saran soor ayaa ku eedeeyey ciidamada xarakada shabaabul Mujaahiddiin in markii ay soo gaareen degmadaas ay halkaa ku dileen dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Sarkaalkan ayaa balan ku qaaay iin awalna ay gacanta ku hayeen haddana ku sii hayn doonaan degmada Yeed isagoona intaa raaciyay in dhankooda uusan soo gaarin wax khasaare ah.
Si kasta ha ahaatee wararkii ugu danbeyey ee halkaa naga soo gaaraya ayaa sheegaya in iminka ay xasilan tahay degmadu dadkii ka bara baxayna ay bilaabayaan sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen.
Xafiiska wararka towfiiq ee mugadhisho
Maamulka ASW ee G.Banaadir oo ku baaqay in wax laga badlo Sharciga AMISOM
Muqdisho: (Sh. M. Network) Maamulka Culaamu’diinka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobalka Banaadir ayaa ugu baaqay beesha caalamka in wax laga badalo shaarciga ciidamada AMISOM ee haatan ay ku joogaan Muqdisho iyagoo dhinaca kalena soo dhaweeyay Shir madaxeedkii lagu soo gabo gabeeyo magaalada Kampala ee Xarunta wadanka Uganda.
Sheekh Maxamuud Axmed Shuuriye oo Ahlu Sunna Waljamaaca ay u magacaabeen xoghayaha war faafinta Ahlu Sunna Waljamaac ee gobalka Banaadir oo shir jaraa’id ku qabtay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ugu baaqay Beesha Caalamka in wax laga badalo sharciga ciidamada AMISOM ee ay kaga howlgalaan gudaha magaalad Muqdisho oo ah nabad ilaalin islamarkaana lagu badalo nabad dhaliyeyaal waa sida uu hadalka u dhigayee.
Waxaa uu sidoo kale si aad ah u soo dhaweeyay kulan madaxeedkii madaxda Midowga Afrika ugu soo gaba gaboobay Magaalada Kampala ee Xarunta wadanka Uganda isagoo sidoo kale soo dhaweeyay howlgalka AMISOM ay ka wadaan gudaha Magaalada Muqdisho iyo dagaalada ay kula jiraan Xisbul Islaam iyo Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab
Max’uud Axmed Shuuriye Xoghayaha Warfaafinta Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir waxaa uu sidoo kale dhaliil u jeediyay Xukuumada KMG Soomaaliya isagoo ku dhaliilay la shaqeyn la’aanta Ahlu Sunna Waljamaaca sida uu hadalka u dhigay.
Xoghayaha Warfaafinta Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir waxaa uu sdioo kale Shaaca ka qaaday in ciidamada Ahlu Sunna waljamaaca ee ku sugan qeybo ka mid ah degmada Hodon ee gobolka Banaadir ay xireen wadada isku xirta isgoysyada Bakaaraha iyo Dabka Sababo la xariira dhinaca amaanka.
Waxa uu ku eedeeyay ciidamada dowladda KMG Soomaaliya in masuul ka yihiin dhibaatooyinka lagu hayo gadiidka rayidka ah ee isticmaala wadooyinka qarda Jeexa ah ee kuyaala Xaafada Hodon iyo Howlwadaag
Dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay Gudoomiyaha Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir C/qaadir Macalin Nuur ayaa waxaa lagu magacaabay sedax xubnood oo ka mid noqonaya Maamulka culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir kuwaasi oo kala ah.
1-Max’ed Max’uud Gaabow oo loo magacaabay la taliyaha guud ee gudoomiyaha Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir
2-Sheekh Max’uud Amed Shuuriye oo loo magacaabay Xoghayaha Warfafainta ee Maamulka Culumaa’udiinka Ahlu sunna Waljamaaca gobolka Banaadir.
3-Cusmaan Mahdi sabriye oo isna loo magacaabay Xoghayaha arimaha Bulshada ee Maamulka Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir
Aqriso oo la soco towfiiq.wordpres Saacad Walba si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya
NALA SOO XARIIR Webmaster /xanafi2010@hotmail.com ama xanafi2030@hotmail.com
Madaxweyne Shariif oo soo gaaray Magaalada Muqdisho eedeeyana Al Shabaab
Muqdisho: (Sh. M. Network) Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay safaro iyo shirar uga maqnaa dalka ayaa Maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho isagoo eedeyn u jeediyay Xarakada Al Shabaab
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka soo dagay gagida diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho kadib markii uu ka soo qeyb galay shirkii madaxda Midowga Afrika ee ka dhacay Magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa waxaa uu saxaafada kula hadlay Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa ugu horeyn waxaa uu soo hadal qaaday xaalada uu marayo dalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in tan iyo markii ay bur burtay dowladii dhexe ee Soomaaliya Shacabka Soomaaliyeed aysan helin dowlad ku soo celisa dalka nadaamkii iyo kala dambeyntii balse sida uu madaxweynuhu carabka u dhiftay hadda dowladda KMG ay diyaar u tahay wax ka qabashada dalka iyo samata bixinta shacabka Soomaaliyeed
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa uu ka hadlay dhibaato uu sheegay in dalka Soomaaliya ay ka wadaan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab oo uu tilmaamay in ay wakiil uga yihiin Soomaaliya Ururweynaha Al Qaacida.
Waxaa uu madaxweynuhu wax laga xumaado ku tilmaamay in dad Islaam sheeganaya oo wadamo badan oo kuyaala Caalmak dambiyo kala duwan ka soo galay ay qas iyo barakicin u geystaan umada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya waxa uu sheegay in dul qaadkii uu ka dhamaaday dowladda islamarkaana ay u soo jeesatay wax ka qabashada dalka Soomaaliya, isagoo xusay in wax ka qabashada dalka Soomaaliya ay iska kaashan doonaan golaha Barlamanka, Xukuumada kMG iyo beesha Caalamka taasi oo uu sheegay inay horsed u noqon doonto dhalinta nabad laga helo dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya iyo wafdi Baaaran oo uu hogaaminayay ayaa maalmihii la soo dhaafey waxaa ay ku sugnaayeen Magaalada Kampala ee Xarunta dalka Uganda iyagoo ka qeyb galay kulankii madaxweynayaasha Midowga afrika ee 27-kii bishaan ugu soo gab gaboobay dalka Uganda, kaasi oo waxyaabihii lagu go’aamiyay ay ugu weyneyd in ciidamo nabad ilaalineed oo horleh la keeno wadanka Soomaaliya.
NALA SOO XARIIR Webmaster /xanafi2010@hotmail.com ama xanafi2030